SIDA LOO XIRO ALBAABKA BIRTA LEH LAFAHA, ALWAAX - LAMINATE, IYO QADIIMKA - OO DUSHA LAGA BUUXIYO. SIDA LOO XIRO GUDIYADA MDF GUDAHA IYO DIBADDABA GACMAHAAGA - SAMEE NAFTAADA
Waxaa jira ragga badan oo jecel inay wax walba ku qabtaan gacmahooda, iyaga oo aan soo jiidin kuwa sayidkooda. Wixii iyaga ah, wax dhibaato ahna ha ku lahayn pokleit wallpaper, oo jiifiso laminate. Maxay ku saabsan tahay albaabka trim?
Waxaan u maleyneynaa in tani ay sidoo kale suurtogal u tahay iyaga, waxaana dooneynaa inaan la wadaagno iyaga talooyin qiimo leh, oo sheegaya sida loo saxo albaabka - birta ama qoryaha, oo sharax farsamooyinka iyo qasaarooyinka qalabka kala duwan ee daadinta. Ku saabsan arrimahan oo dhan - hoosta.
Cabbiraad ka badan: alaabta
Waxaa jira fursado dhowr ah oo lagu xirayo:
Laminate flooring - Waxay derbiyada iyo xitaa saqafka lagu xoqdo, sidaas darteed waxaad u qaadan kartaa si ammaan ah si aad u daboosho albaabka. Laakiin khabiiradu waxay ku talinayaan in ay isticmaalaan laminate keliya guryaha oo ay doorbidaan kaliya gudaha. Laminate waa mid u adkaysata cadaadiska farsamada, laakiin uma dulqaadanayo qoyaan xad dhaaf ah;
dahaadhka - waxaa loo tixgeliyey alaab guud, waxay ku habboon tahay labada aqal iyo guri gaar ah, halkaasoo maaddadu ay noqon doonto mid u nugul daadadka. Xakameyntu waa sahlan tahay in lagu dhajiyo dusha, waxaana lagu rinjiyeeyn karaa midab kasta. Caadi ahaan, waxaa laga sameeyaa gudida la gooyey ee qoryaha dabiiciga ah, laakiin sidoo kale waxaa jira xulashada miisaaniyadda - bacda balaastikada ee balaastigga ah (polyvinyl chloride), waxay u adkaysaa qoyaanka, mana ku saleysnayn duufaan ama koronto. Laakiin waa in laga ilaaliyaa qorraxda tooska ah, maxaa yeelay waxay saamaysaa muuqaalka muuqaalka;
Guddiga MDF - Qalabkani wuxuu ka samaysan yahay fiilada qoryaha loo xoqay oo la gashado dib udajin leh - doorasho qurux badan, sababtoo ah waa mid aad u adag iyo jawi bey'adeed. Laakiin guri gaar loo leeyahay oo la doorto laguma talinayo. Tijaabooyinka MDF ayaa lagu rinjiyeeyn karaa midab kasta, ku dheji sawir ama filim.
Waa muhiim! Tixgeli: miisaanka albaabka ee la jaray MDF wuxuu si weyn u kordhin doonaa, kaas oo noqon doona culeys dheeraad ah oo ku yaal albaabbada albaabka.
maqaarka - Habka ugu jaban ee fudud, fudud, qaabka iyo waqtiga-la-imtixaanka. Markii hore, waxa laga yaabaa in ay ahayd habka aasaasiga ah ee xuddunta albaabbada. Run, leatherette waxay leedahay hal dhibaato weyn - way sahlan tahay (xitaa haddii ay dhacdo in ay si ula kac ah ula xiriiraan walxo fiiqan).
Tixgeli sifooyinka saldhigga, taas oo ah, waxyaabaha ka soo baxa albaabka la sameeyay.
Nidaamka dayactirka, waxaa jira fikrado iyo fikrado kala duwan, waxaa wanaagsan in la barto sida rinjiga looga saaro derbiyada, sida loo xoqo cadeyn, sida loo xoqdo muraayadda derbiga, sida loo xiro tuubo guri khaas ah, sida loo xiro, sida loo sameeyo qaybta dusha sare ee albaabka, sida loo dhigo furaha nalka si loo rakibo kululeeyaha biyaha socota, sida darbiyada looxyo leh qalalan, sida loo xiro indhoolayaasha.
Si aan u bilowno, aynu ka hadalno qaababka ugu caansan:
Hoggaaminta halkan waxay haysaa geedo adag. Dhamaanba sababtoo ah kharashka qaaliga ah ee qalabka. Run, tani waxba kama yartahay dhibaatooyinka: isagu waa mid fudud, uma dulqaadan karo qoyaanka iyo dhibco heerkulka xoog leh.
Doorasho kale waa lowska. Geedka Tani sidoo kale waa mid aan qaali ahayn. Waxay leedahay qaab qurux badan iyo qaababka qurxinta. Waxay leedahay sifooyin badan oo ku saabsan wax qabadkeeda.
Alter wuxuu ku fiican yahay albaabka hore ama albaabka musqusha, maadaama uu si fiican u hayo qoyaanka. Waxaa intaa dheer, waxay leedahay waxyaabo hooseeya, taas oo muhiim ah.
Xulashada ugu fiican waa, dabcan, dhuxul. Waa mid adag, xoog leh, qoyaan u adkaysta, uma ogolaanayo qabow iyo qaylada qolka. Dusha sare ee albaabkan oo kale ah ayaa si aan fiicnayn u saameynaya saameynta. Laakiin walxahan waa kan ugu qaalisan.
Sidoo kale, kalluunka, xashiishka, ash, iwm ayaa loo isticmaalaa. Sidaa darteed, waxaa suurtagal ah in la doorto waxa adiga kugu habboon (oo aad jeceshahay, oo awoodi kartid). Faa'iidooyinka ugu muhiimsan ee albaabada alwaaxa:
iyada oo daryeel caafimaad leh, waxay socon doontaa in ka badan darsin sano ah;
buuqa sare iyo rinjiga kuleylka.
waxay ubaahan tahay daryeel dheeraad ah iyo xannaano aad u ballaaran ee hawlgalka;
Noocyada qoryaha qoryaha qaarkood waxay leeyihiin diidmo qoyan oo yaryar, sidaas darteed ma aha mid ku haboon qolka.
Waa muhiim! Iibsashada albaab alwaax ah, dhammaanteed macnaheedu waxa weeye kaliya la soo-saaraha soo-saara aaminsan! Badi shirkadaha aan firaaqada aheyn waxay iibiyaan raqiis, sidaas darteed tayada yar, qalab qaali ah oo qaali ah. Si arrintan loo sameeyo, waxay xambaarsanyihiin alwaaxda midabka la doonayo. Qofka iibsadaha ah ee aan la iibsan wuxuu si fudud u arki karin been abuur.
In lagu xiro albaabka alwaaxku wuxuu noqon karaa mid ka mid ah qaababka kor ku xusan.
Albaabka birta (birta)
waxaa la aaminsan yahay in ay tahay mid la isku halleyn karo (laakiin halkan waa in aynaan ilaawin xayndaabka tayo sare leh!);
Cadaadiska qoyaanku waa ka sarreeyaa kan qoryaha "saaxiibka";
waxay u dulqaadataa isbeddellada heerkulka;
adigoo isticmaalaya shaabad, waxaad heli kartaa buuqa sare iyo rinjiga kuleylka;
uma baahna daryeel gaar ah (inkasta oo ay muhiim tahay in isha lagu hayo albaabka).
qoob-ka-shaqaynta iyo xoqiddu waxay inta badan ka muuqdaan albaabka birta, taas oo u egtahay muuqaalkeeda muuqaalkeeda;
xayawaanku wuu dhici karaa;
mararka qaarkood xooggoodu ma fiicna, tusaale ahaan, inta dabka lagu jiro samatabbixiyeyaasha, waxay qaadan doontaa waqti badan si ay u furaan.
Albaabka birta ayaa sidoo kale ku haboonaan doona mid kasta oo ka mid ah alaabada la soo sheegay.
Sida loo xiro albaabka
Waxaan si toos ah ugu leexannaa qalabka kala duwan ee kala duwan, wax ka baro dhammaan sifooyinka hababka kasta.
Tilaabooyinka talaabada xejinta:
Albaabka ka saar albaabbada kana dhig meel dusha sare ah.
Ka saar dhammaan qalabyada - qufulka, gacmaha, lafdhabarta, iwm.
Rinjirta xayawaanka alwaax ee rinjiga la rabo oo ku dheji wareega wareegga dhismaha (birta, biraha tuubada ayaa loo baahan yahay halkan).
Gaashaan ka samee xuduudaha lakulmay (hubso in dhammaan qaybaha waa in ay u dhigmaan sida ugu dhow ee suurtogalka ah ee midba midka kale - isku-xiran-isku-laaban).
Cabbir u qaad masaafada u dhaxaysa shidaalka shakhsi ahaaneed iyo natiijooyinka u wareeji gaashaanka.
Sawirrada albaabbada dhererka iyo dhererka (tani waa sida ugu wanaagsan ee loo sameeyo jigsawga korantada).
Si tartiib ah u hirgelinta halabuurka albaabka. Sug sugaanta koolada si aad u xajiso, ka dibna gaashaan ka saar xarigga kuna riix wax culus.
Marka ay jiljiruhu jilcaan, albaabka waxaa la dhigi karaa meel ka dibna lagu dhejiyaa qalabka.
Video: sida loo xiro albaabka birta leh laminate
Waa muhiim! Isticmaal laminate ugu yaraan 7-8 mm qaro weyn!
Ha ilaawin baahida aad u qabatey caleenta. Waxay gurigaaga ka ilaalinayaan qaylo-dhaan iyo buuq, albaabkuna wuxuu u muuqdaa mid la soo bandhigi karo.
Meeluhu waxay sameeyaan laminate isku mid ah oo loo isticmaalay in lagu xiro. Laakiin marka hore, baabi'iyo dhammaan khariidadaha u dhexeeya derbiga iyo xakamaynta xabbad-joojinta ama cement-ka gaarka ah (oo ku saleysan macmacaanka). Haddii aad dooratid xumbo marka aad qallajisid, hubi inaad jarjartid dhamaan qaybta xad-dhaafka ah ee mindida oo kaliya ka dibna u sii soco qulqulka:
Habka ugu caansan wuxuu xajin karaa qalab dhameystiran oo leh xal. Meelaha noocan oo kale ah looma dhufan doono, waxay noqon doonaan kuwo daba joog ah oo aan muuqaal lahayn;
haddii aan ka hadalno qurxinta dabacsanaanta, markaa waxaad isticmaali kartaa qalab gaar ah ama rinji. Run ahaantii, waa lagama maarmaan in la bixiyo fiiro gaar ah oo ku saabsan maaddada, tusaale ahaan, suurtagal la'aanta suurtogalka ah (soo-saaraha ku yaal baakadka ayaa si xaqiiq ah u sheegi doona);
Habka kale ee qaabeynta qaab dhismeedka waxaa ku jira muraayad la jimicsado. Si arrintan loo sameeyo, waxaad u baahan tahay inaad sameyso "qalfoof" fudud oo ah baararka qoryaha iyo sheyga biraha. Kadib, dalbashada naqshadaha guud (ha ilaawin baaluqyada qashinka ee ku xiran laydhka), ku dhaji laminate illaa sheyga - adoo wada jira ama guud ahaanba. Jajabka toosan waa in lagu dhajiyaa cidhifyada iyo bartamaha, iyo cirifka - kaliya ee geesaha.
Video: sida loo sameeyo xargaha albaabka hore Sida hore loo soo sheegay, laminate ayaa ugu fiican loo isticmaalaa albaabada guriga, iyo gudaha. Waa sahlan tahay inaad isaga daryeesho - waa ku filan inaad ku dhaqdo qashinka waqti ka waqti iyada oo la adeegsanayo xal fudud oo dareere ah (kiimikooyin adag ayaa burburin doona waxyaabaha).
Haddii aad wali rabto inaad codsatid laminate iyo dusha ka dib, waxaad isticmaashaa xalka khafiifinta biyaha iyo difaaca khafiifinta. Daryeelka habboon wuxuu sii kordhin doonaa nolosha walxahan illaa hal sano ma aha.
Dhaqdhaqaaqa dhamaantiis wuxuu u soo baxaa wax kasta oo wanaagsan haddii aad si caqligal ah u dhisto dhismaha Maqaar leh hawo gaaban, adhiga, dufanka, duufaanka, guntiga, xayndaabka lebiska, aagga indha la ', sigaar cabbista kuleylka iyo qabowga, sariirta qiiqa, qubeyska, saqafka salka, , qiiqa, wakhtiga lacag la'aanta ah iyo taakuleyn dhaqaale, waxaad samayn kartaa wax kasta oo aad adigu leedahay.
Ka hor intaanad bilaabin, tixgelin hal shey: inaad ku rakibtid qalabka derbiga ee gudaha, waxay u baahan tahay inay guriga ku jiifiso ugu yaraan hal maalin si ay u isticmaasho microclimate.
Ka daawee lamellas leh antiseptic iyo lacaga.
Albaabka ka saar saabuunta, nadiifi, ka saar qalabyada dhan.
Slat lamella adigoo ku xiran habka rakibaadda.
Ka soocid dhinaca bidixda. U diyaari cutubka kowaad si cad oo qotodheer (tan waxaa lagu hubin karaa heer). Ku dheji ciddiyaha oo dhammaystiran.
Lamella kasta waxay u dhigantaa taako hore, si isku mid ah u dheji. Dhammaadso sanduuqa.
Mar labaad, fur badeecada leh qallayl iyo ka dib qalajinta, dib u geli qalabyada.
Ku soo celi dukumiinka furitaanka.
Haddii aad haysato albaab bir ah, halkan waa waxoogaa algorithm ee waxqabadyada:
Haddii ay suurtagal tahay, ka saar adegyada, waxay noqon doontaa mid ku habboon shaqada.
Ka saar qalabyada, nadiifi rinjiga.
Lamellae waxaa lagu hagaajin karaa klyaymer, iyaga oo ku dhejiyay baqshiinka birta oo leh qafiye.
Haddii aad doonaysid inaad kuleysatid albaabbada, ku rakib tuullo alwaax ah. Qalabka ayaa ku xiran nalka. Qalabka kuleyliyaha (caagga xumbada, xayawaanka xumbada) ayaa gooyaa qiyaasta iyo meel u dhaxaysa xayawaanka ku jira guluubka. Haddii ay lagama maarmaan noqoto, ku dhaji qalabka dusha sare ee dusha sare. Ku xir dhejiyada xirmooyinka si adag u xir oo ku dheji xargaha adigoo dhameystiraya ciddiyaha.
Sida quruxda guriga guriga isku xira waa inuu tixgeliyaa dhirta, xayawaanka alpine, ilo, xayndaab ceel, sariir suntan, trellis ah, beerta cagaarka ah, isku dhafan, qul qallalan.
Haddii aad si joogta ah u isticmaashid alaabta qoryaha casriga ah, maaddadu waxay noqoneysaa mid aad u firfircoon oo qoyaan u adkaysta, oo lagu daro wax kasta oo aad ka hortagi karto daaqa sidan. Dhamaan arrimahan waxay ku siin doonaan maaddada adeeg nolol dheer - in kabadan darsin sano.
Ma taqaanaa? Waxaa jira xayndaab badan oo ku yaala Ireland, tanina maaha kaliya. Waxaa soo baxday in sababta oo dhan ay tahay ... xoriyadda dadka maxalliga ah. Marka Fiktooriya, Queen of the Great Britain iyo Irland, ayaa ku dhintay 1901, amar ah ayaa la soo saaray - calaamad u ah barooran, albaabbada oo dhan waa in lagu dubo madow. Irish, oo ka mudaharaadaya, ayaa ku riday dhammaan midabada qaansoroobka, laakiin ma madow.
Waxaa lagu rakibaa isla markiiba dusha sare ee albaabka, iyo maqaarka jira (tusaale ahaan, maqaarka). Ha ilaawin inaad ka saarto dhamaan qalabyada intaadan bilaabin shaqada.
Dhaqdhaqaaqa oogada ku wareegsan wareegga balbaliga (qayb ka mid ah boodhka, oo xidhaya albaabka). Tallaabo - 20 cm Wadajir - 3 mm.
Dhigmee tiro ka mid ah godadka adigoo raacaya wareega caleenta albaabka (gareynta iyo dhexroorka waa isku mid).
Xidho suufka gudaha MDF, ka dibna dibadda. Dhererka mishiinku waa dhowr millimitir ka yar inta u dhaxaysa dhererka webka.
Gundhigga noocaas ah waxaa loo tixgeliyaa kuwa ugu cimri dheer ee noocyada kale ee walxaha. Waxa ugu muhiimsan waa in la ilaaliyo. Si aad u daryeesho ma ahan mid adag, adigoo tirtiraya mashiinka jilicsan ama buraashka (burushyada adag ama burqaha adag halkan ma shaqeyn doono). Laguma talinayo in aad isticmaasho koloriin si aad u dhaqdo, iyo sidoo kale abrasives (budo, dhoobo, iwm.). Meelaha si xoog leh loo nadiifiyo waxaa lagu tirtiri karaa saabuunta saabuunta.
Video: sida loo xiro saxanka MDF ee albaabada xaabada
Dareeraha geedaha qoryaha ah sidan:
Ka saar dhamaan waxyaabaha ka soo galaya albaabka, ka saar, ku dhaji dusha qolka.
Ka dalbo kuleylka kuleylka dhinaciisa (jilciyeyaasha synthetic, xayawaaniinta polyetylen, iwm.).
Nail iyo waqti isku mid ah adkee maqaarka, ka bilowdo inay ka shaqeeyaan xarunta dhexe ee albaabka.
Nidaamka cirifka dhexe ee ciddiyaha (xagga sare ilaa hoose), oo si fiican u jiidaya maqaarka. Sidoo kale, garaac safaf kale - marka hore dhinaca bidix ee safka dhexe, ka dibna dhinaca midig.
Laakiin halkan waxaa jira hal dabagal ah - marka ay soo laabanayaan geesaha. Dariishado gaar ah ayaa laga sameeyaa albaabka banaanka, kuwaas oo daboolaya farqiga u dhexeeya caleemaha albaabka iyo sanduuqa. Maro jilicsan, ka dib, adoo yareynaya, cirifka dhererka cirridka leh ciddiyaha. Cirbadaha looma baahna gudaha gudaha - maro maro maro iyo qalo.
Dareemku wuxuu u egyahay xiiso dheeraad ah haddii aad fidin karto xadhig bir ah oo lagu qurxiyo ama nambar khaas ah oo u dhexeeya ciddiyaha. Tani waxay u muuqataa in ay samayso qaab kasta.
Waxaa jira hab kale. Waa mid caalami ah sababtoo ah waxay ku habboon tahay albaabada birta iyo birta birta ah. Halkan waxaa loogu talagalay naqshadeynta geesaha waxa loo baahan yahay qariir gaar ah, kaas oo cidhifyada maqaarka lagu xiro. Qalabka waxaa lagu dhajin karaa wareegga wareegga caleenta albaabka, ama waxaa lagu dhejin karaa nalka yar yar. Waxay noqon doontaa mid ku kalsoon in la isticmaalo hababka labadaba. Farsamadani waxa ay hubisaa in ay ka buuxsamaan meelaha kala duwan ee u dhexeeya guntiga iyo sanduuqa, waxay kor u qaadaan cadaadiska caddaaladda iyo hagaajinta muddada dheer, iyo sidoo kale inay si fiican u qaboojiyaan cidhifyada maqaarka.
Video: sida loo xiro dermantin Haddii aad si taxadar leh u daaweyso trim, ka dibna waxay sii socon doontaa waqti dheer. Daryeel gaar ah looma baahna. Waa ku filan waqti ka waqti si aad u tirtirto maro jilicsan oo jilicsan (waxaa suurtogal ah in lagu daro qalabka wax lagu nadiifiyo).
Ma taqaanaa? Albaabada ugu sarreeya waxay ku yaalaan iswadaarinta Xarunta Xirfadda Kennedy, oo ay leedahay NASA. Waxaa jira afar ka mid ah oo kaliya, dhererkoodu waa 139 mitir, marka la barbardhigo sawirka Liberty in New York waa "93" oo kaliya.
Sida aad u arki kartid, waxaa jira fursado badan oo trim ah. Oo midkood kastaaba wuxuu heli doonaa waxa uu u baahan yahay. Waxyaabaha ugu muhiimsan - in la raaco shaqada dhammaan tilmaamaha. Iyo sidoo kale - ha ilaawin daryeelka daawada, midkasta oo aad doorato.
Albaabka ugu fiican albaabka: dib u eegista
Waxaan kugula talin lahaa inaad fiiro gaar ah u yeelato xakamaynta MDF. Marka laga soo baxo dibedda waa sahlan tahay in lagu dhajiyo albaabka, isaga oo ku dhajinaya qalabka wax lagu tolay ama silikoon. Iyo laga bilaabo qalabka gudaha ee caleenta caleenta suufka ah, gelinaya xargaha ama xargaha xumbada. Waxaad ku dhejin kartaa adigoo isticmaalaya jala ama alwaax birta ah, garaac madow oo macmal ah ku wareegsan wareegga wareegga. Ku dhejisan biraha ayaa ugu fiican curyaanka.
Ma sahlanaan kartaa oo ka raqiisan kartaa iibsashada ama dalbashada barta sare ee albaabka ka samaysan dhinacyada saqafka ama MDF? Ka dibna waxaa dhici karta in uu ku guuldareysto, waana waxa ugu xun, ka soo bixi doona qaali. Waa hagaag, haddii aad weli rabto inaad samayso naftaada, ka dibna waxaan ku talin lahaa haanta muraayada qalabka 11 mm qaro, laga sameeyay Tomsk. Shirkad kasta oo lagu yareeyo batroolka waa lagaa jarayaa oo waxay ka dhigi doontaa gees ka mid ah melamine ama PVC. Qalabka aluminiinka ku dhaji wareega wareegga iyo waxaad noqon doontaa qurux.
Albaabka waxaa laga yaabaa in la garaaco oo ay bixiso maqaayado badan, oo kuleylaya. Laakiin tani waa qarnigii ugu dambeeyey! Albaabka birta waa la rinjiyeeyaa. Haa! Rinjiga khaaska ah Astratek, oo si fiican u fadhiya albaabka biraha iyo wuxuu leeyahay hanti dabayshu fiican tahay. Waxaa loo isticmaalaa qulqulka kuleylka biyaha iyo tubooyinka dhoobada.